पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई अस्पताल भर्ना – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
११ फाल्गुन, २०७७ १८:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई अस्पताल भर्ना भएका छन्। दिल्लीस्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थानमा बिहान ९ बजेदेखि भर्ना गरिएको प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए। आज दिनभर उनलाई अस्पतालमा राखेर आवश्यक सबै परीक्षण गरिने उनले बताए।
नेपाल वायुसेवाको विमानबाट आइतबार स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतको राजधानी नयाँदिल्ली गएका थिए। भट्टराई लामो समयदेखि पेट सम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन् । उनले लामो समयदेखि काठमाडौंको निदान अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार गराउँदै आएका थिए। उपचारका क्रममा चिकित्सकहरुले न्युरो-इन्डोक्राइनको ट्युमर भएको आशंका गरी सल्लाह र सिफारिस गरेकाले उनी त्यसको उपचारका लागि दिल्ली गएका हुन्।
भट्टराईले उपचारका लागि भारत जानुपरेकोमा आफू लज्जित र दुखित रहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ‘नेपाली दूतावासको अतिथि कक्षमा बसेर घोत्लिॅदै गर्दा आफू लज्जित/दु:खित भए छु । २१औं शताब्दीमा शरीरको कुनामा पलाएको ट्युमर सामान्य कि घातक हो छुट्याउन नसकेर विदेशमा छु ! सामान्य नागरिकको के होला ?’
दिल्लीमा रहँदा भट्टराई नेपाली दूतावासमा बसेका छन्। भट्टराईसँगै उनकी पत्नी हिसिला यमी र प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डे गएका छन्।